ချစ်စရာ Precious Moments Couple | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ချစ်စရာ Precious Moments Couple	14
ချစ်စရာ Precious Moments Couple
Posted by Tawwin Pan on Jan 22, 2016 in Creative Writing, My Dear Diary | 14 comments
ဒီနေ့တော့ အသဲကွဲချင်သလိုလို ရောဂါထနေတာနဲ့ Google မှာ Broken Couple ဆိုပြီး ရိုက်ရှာလိုက်တာ အခုတင်ထားတဲ့ ပုံလေးတွေတွေ့တော့တာပါပဲ။ သဘောကျလွန်းလို့ မန်းဂဇက်မှာ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ပုံလေးတွေတွေ့တော့ အသဲကွဲချင်သလိုလိုဖြစ်နေတဲ့ရောဂါတောင် ဘယ်ရောက်မှန်းမသိဖြစ်သွားတယ်။ Amazon.com မှာတွေ့တာ တစ်ခုကို $၅၀လောက်ရှိတော့ ကိုယ်တိုင်လည်း မ၀ယ်နိုင်။ V Day ကလည်း ရောက်တော့မယ်ဆိုတော့ကော ရွာထဲက ခင်သူမင်သူတွေဆီကပေါ့လေ…..Precious Moments Couple အရုပ်လေးများ ယောင်ယမ်းပြီး လက်ဆောင်လေးများရမလားလို့ ရည်ရွယ်ရင်း…..(အမှန်တော့ သူများတွေလို စာရေးတတ်ချင်တာရယ်…မရေးတတ်တော့လည်း ပုံလေးတွေတင်လိုက်တာပါ)
. About Tawwin Pan
အောင် မိုးသူ says: ချစ်စရာလေးတွေပဲ ဒါပေမယ့် အဲ့လိုအရုပ်တွေကို သဘောအကျကြီးထဲမပါဘူး။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 115
Tawwin Pan says: ပထမဆုံးကွန့်မန့်ပေးတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် (မှတ်ချက် ဦးဦးဘလက်ချောလေသံဖြင့် ဖတ်ပါရန်)
ခင်ဇော် says: မြင်တာနဲ့ ချစ်စာလေးတွေလို့ ခံစားရသော်လည်း
ကိုယ်က အကြမ်းပညာရှင် မလားးး
နိ ဒါယူမှာ လားး??
လုံမလေးမွန်မွန် says: ဂနေ့ သများတို့ ချစ်သူသက်တမ်း နှစ်နှစ်ခွဲပြည့်တဲ့နေ့မှာ ဒီပုံလေးတွေ တွေ့လိုက်ရလို့ ကျေးကျေးပါလို့ . . ဘလိုင်းကြီးဝင်ကြွားခြင်းဖြစ်သည် ဟိဟိ
Tawwin Pan says: အားကျသကွယ်။ တို့များတော့ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တိုင်း First Dating ကို မှတ်မထားရကောင်းလားဆိုပြီး ခေါင်းခေါက်ခံနေရတာပဲ။ အခုထိလည်း မှတ်မထားပေါင်။
ဂျက်စပဲရိုး says: ဖုန်းထဲရော
Google calendar ထဲရော ဖဘ ထဲရော
မှတ်လို့ ရသမျှ နေရာစုံ မှတ်ထားရတယ်။
နို့မို့ ရှင်းလို့ ပြီးတော့မှာ မဟုတ်း)
လုံမလေးမွန်မွန် says: ဂယ်တော့ မေ့နေတာ ဘယ်နှစ်လမှန်းမသိဘူး . . . ၂ ယောက်လုံး သတိမရတာဆိုတော့ ဘယ်သူ့ဘယ်သူကိုမှ ကောက်လို့မရဘူး . . . ဒီနေ့တောင် ကံကောင်းလို့ သတိရတာ :D
kai says: လူအကောင်လိုက်ကြီးဘေးမှာရှိနေရင်တော့…. မေ့စရာတွေ.. မေ့လိုက်ပေါ့ကွယ်..
သူ့ထက်အရေးကြီးတာတွေ.. ဆက်… လုပ်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1191
Kaung Kin Pyar says: ပန်ကာလေသုံးတဲ့ အစိုးရရုံးခန်းတွေအတွက်တော့ စာရွက်ဖိလို့ ကောင်းလိုက်မယ့် အမျိုး…. ဒါပေမယ့် စာရွက်ဖိဖို့ ဒေါ်လှ ၅၀တော့ တန်ဘူးရယ်…
ဂျက်စပဲရိုး says: အဲ့ အရုပ်မျိုး ဒေါ်လှ ငါးဆယ် ဆိုတာကြီးကတော့ ဈေးကြီးလွန်းပါသကွယ်။
မြန်မာငွေ ငါးသောင်းကျော် ဆိုတာ စားပိုးနင့်လောက်အောင် ဗိုက်ရိုက်စားလို့ရသကိုးး)
Ma Ma says: အင်းးးးးးးးးး ပြောရမယ်ဆိုရင်
၀ါးစားတတ်တဲ့ ပါးစပ်က ပိုကြီးနေတယ် ထင်ပါရဲ့။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 6346
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: အဲဂလိုအရုပ်များပြီး စာနဲမှ ကြိုက်ဒါ
alinsett says: .ဖွေးဖွေးနဲ့တူတဲ့ အရုပ်မတစ်ရုပ်လောက်…အနော့်ကို…ဘူဝယ်ပေးမဲ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7194
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .ဘာဘာ ဘာမှမပြောတတ်တော့ပါ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.